बक्सअफिसको उद्घाटन, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
बक्सअफिसको उद्घाटन, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
नेपालमा बक्सअफिस लागू नहुँदा निर्माताहरु मारमा पर्दै आइरहेको गुनासो चौतर्फी आउने गर्छ । बक्सअफिस लागू नहुँदा एउटा निर्माताले पारदर्शी रुपमा आफ्नो फिल्मले गर्ने विजनेश थाहा पाउन सक्दैनन् । त्यसैले पनि नेपालमा बक्सअफिस लागू गर्नु पर्ने कुरा बारम्बार उठ्दै आइरहेको छ ।
यसलाई समाधान गर्न चलचित्र विकास बोर्डले नेपालमा बक्सअफिस लागू गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि गर्दै आइरहेको पनि हो । तर, अहिलेसम्म नेपालमा बक्सअफिस लागू भने भएको छैन् ।
अब भने नेपालमा बक्सअफिस लागू हुने अन्तिम तयारी सुरु भएको छ । मंगलवारबाट काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको शिखर कम्प्लेक्स सुबिसु बिल्डिङमा नेपाली बक्सअफिस सिष्टमको ‘डाटा हब’ सञ्चालनमा आएको छ ।
उनले भनिन्, ‘फागुन ७ गते सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ई-टिकेटिङ सिष्टम जडान भइसकेका मल्टिप्लेक्स हल र केन्द्रीय सर्भरबीच लिंक गर्न आवश्यक पर्ने ‘एपिआई’ उपलब्ध गराउन र ई-टिकेटिङ जडान गर्न आवश्यक पर्ने बोर्डले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार हार्डवेयर तथा नेटवर्किङ सम्बन्धि सामाग्री जडान गर्न पत्रचार गर्ने छौं ।’
अध्यक्ष पौडेलले वर्ष २०७४ चैत १५ गते भित्र काठमाडौं उपत्यकामा सम्पूर्ण ई-टिकेटिङ जडान भइसकेका मल्टिप्लेक्स हलहरुले चलचित्र विकास बोर्ड वा सफ्टवेयर परामर्सदातालाई आवश्यक पर्ने ‘एपिआई’ उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएकी छिन् । उनले अब नेपालमा बक्सअफिस लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दोधारमा नरहन पनि आग्रह गरिन् ।
उनले अगाडि थपे, ‘हामी हल सञ्चालकहरु चलचित्रको व्यापार पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । हामीले बक्सअफिस लागू हुँदा विरोध गर्नु पर्ने कारण नै छैन ।’ उनले अब नेपालमा बक्सअफिस लागू भएरै छाड्ने दाबी गरे ।
यस्तै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन बक्सअफिस अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा लाखौं व्यक्ति आश्रित छन् । उनीहरुको सम्मानका लागि पनि बक्सअफिस आवश्यक छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गराउन पनि बक्सअफिस लागू हुनै पर्छ ।’